ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ : စစ်ကိုင်းတိုင်းဟုမ္မလင်းမြို့နယ်နမ်တောကျေးရွာမီးလောင်မှုမြင်ကွင်း
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၊ ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်နမ်တောကျေးရွာတွင်မီးလောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ပျက်စီးဆုံးရှုံမှုများမှာ အိမ်ခြေ =. ၅၃၀အိမ်ထောင်စု= ၅၃၅ နေထိုင်ကြသည့်အနက်အိမ်ခြေ. ၁၀၀ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး - ၁
ဓမ္မာရုံငယ်. ၁ဈေးဆိုင်ခန်း ၇၂မီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး. မီးဘေးသင့်ဒုက္ခသည်. ကျား( ၁၆၉) ဦး၊ မ. (၂၁၈) ဦး ပေါင်း (၃၈၇) ဦးဟု သိရှိရပါသည်။
အလှူငွေကောက်ခံရရှိမှု ငွေသား 19.2.2013 နေ့ထိ သိန်း 200 နဲ့ ဆန်အိတ်ပေါင်း 100 ကျော် ကောက်ခံရရှိထားပါသည်။
ကျန်တဲ့ ဆီပုံး ၊ အ၀တ်အထည်တွေ
မီးဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက် ယာယီ နေဖို့အတွက်4နေရာ ခွဲပြီးစီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားသည်ဟု ဆိုပါတယ်။
မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကတော့ သိန်းပေါင်6းသောင်း ကျော်လောက် ပျက်စီးဆုံးရှုံးတယ်လို့ သိရပါသည်.။
ပေးပို့ သူ ဗွီဒီယို ကိုအောင်မြတ်
ဒီနေရာတွင်မူရင်းမီးလောင်မှုမှတ်တမ်းများအား http://www.youtube.com/watch?v=biC1gwLz1V8&list=UU1gBYmW_Kaq7y96ioa4R0jw လာရောက်နိုင်ပါတယ်။
ကဏ္ဍ သတင်း ရုပ်သံ